That's so good, right?: ကျနော့်နာမည် ကိုကိုဇော်
ကျနော့်နာမည် ကိုကိုဇော်ပါ။ လူတကာသတိထားမိလောက်တဲ့ အမည်မျိုးတော့မဟုတ်ပေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုမိတ်ဆက် ရမယ်မှန်း မသိလို့ပါဗျ။ ကျနော်က ကိုယ်ကာယလှပကျန်းမာဖို့ လေ့ကျင့်ကစားနေသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်ကာယအလှအပ လေ့ကျင့်တည်ဆောက်နေသူဆိုတော့ ကျနော့်ကိုယ်ခန္ဓာပုံရိပ်က မြင်သူတွေ့သူတိုင်း သဘောကျစေတာအမှန်ပါ။ ကြွက်သားထုထည် အထွားကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ရှိသင့်တဲ့နေရာမှာ အကြွားအရွားနဲ့ အမြှောင်းလိုက်တော့ပေါ်နေပါပြီ။ ခေါမ ရောမက ကျောက်ဆစ်ရုပ်တွေ လိုတော့ဖြစ်နေပြီဆိုရပါမယ်။ ကျနော့်အရပ်က သိပ်မမြင့်ပါဘူး ၅ပေ ၅လောက်ပဲရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုဖိုးစွံလို့ခေါ်ရလောက်တဲ့လူ ဖြစ်မနေရခြင်းအကြောင်းက အရပ်အမြင့်ကြောင့်ဖြစ်မယ်ထင်ပါရဲ့။ ဒါငါ့ရည်းစားဆိုပြီး လက်ဆွဲခေါ်ပြချင်စိတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ အရပ်အမောင်း မြင့်မြင့်မားမားရှိမှ ၀င့်ဝင့်ကြွားကြွားရှိမှလားလို့လေ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားဘယ်လိုပြောင်းပြောင်း မျက်နှာအနေအထား မပြောင်းဘဲ အိပ်ရာကထချင်မိတယ်။
တစ်ပတ်ကို ငါးရက် ပျှမ်းမျှ ၇နာရီလောက် ခန္ဓာကိုယ်ကို လေ့ကျင့်ကစားပေးပါတယ်။ မနက် လေးနာရီ သို့မဟုတ် ညနေပိုင်းဆို ၃နာရီ လောက်ပေါ့။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဆိုရင် နေ့တစ်ဝက်ပဲကစားပြီး တနင်္ဂနွေနေ့တော့နားပါတယ်။ ကြားချိန်တွေကတော့ ရပ်ကွက်အတွင်း အနီး အနားက လူငယ်အချို့အတွက်နဲ့ ကလပ်အချို့မှာ နည်းပြအဖြစ်အလုပ်လုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုပါတော့လေ။ တစ်ပတ်ကို နှစ်ရက်သုံးရက် လောက်တော့ ကျနော့်ရဲ့မိခင်ကလပ်ဖြစ်တဲ့ Super Hero ကလပ်မှာ လူသစ်တွေကို ပြန်ပြဖြစ်ပါသေးတယ် အနားယူတဲ့ရက်မှာ အငြိမ်မနေနိုင်တာကြောင့်ပါ။
ဘ၀တစ်ခုရှင်သန်ရပ်တည်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီအားကစားကို အသေခင်တွယ်နေတာကအမှန်တရားဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်တော့မှ အတွန့်တက်ဖို့မစဉ်းစားဖြစ်ခဲ့ပါ။ ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ကောင်းကောင်းလေး လေ့ကျင့်နေချိန်၊ လေ့ကျင့်ကစားပြီး လို့ အနားယူစအချိန် လေအေးအေးကို ၀၀ရှူလိုက်တဲ့အခါ ခံစားလိုက်ရတဲ့ဖီလင်၊ ပြီးတော့ တစ်ပါးသူတွေရဲ့ လက်ခုပ်သံတွေကို ကျနော် သာယာတယ် သဘောကျတယ်။ ဒီအားကစားက အသက်ငယ်ငယ်ကနေ အသက်ကြီးတဲ့အထိ ကစားလို့ရတဲ့ အကောင်းဆုံးအားကစား တစ်ခု၊ ပြီးတော့ ကိုယ်တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းချွန်ပြီး ပြိုင်ပွဲဝင်လို့ရတယ် မဟုတ်လား။
ခင်ဗျား အနီးကပ်မကြည့်ဘူးဆိုရင်တော့ ကျနော့်ခန္ဓာကိုယ်က တကယ့်ပြီးပြည့်စုံတယ်လို့ပြောရပါမယ်။ ဆိုင်ကယ်စီးရင်းလဲတော့ လက်ထောက်မိလိုက်တာမှာ လက်မောင်းအတွင်းပိုင်းဒဏ်ရာရတာကြောင့် ခွဲစိတ်ထားရတာ အမာရွတ်နည်းနည်းထင်းနေရောလေ။ ဒဏ်ရာရကာစအချိန်က တော်တော်စိုးရွားတဲ့ စိတ်ခံစားမှုကော ငြိမ်ငြိမ်ကလေးထိုင်နေရတာရောကြောင့် အတော် စိတ်ကသိကအောင့် ဖြစ်မိပါတယ်။ လက်အရေပြားက ဆွဲချုပ်ထားသလိုဖြစ်နေတော့ နည်းနည်းလှုပ်တာနဲ့ တင်းကနဲဖြစ်ပြီး နာနာသွားတာ။
သိပ်မကျယ်သော မြို့ငယ်လေးမှာ အိမ်သေးသေးလေးနဲ့ ကျနော်တစ်ယောက်တည်းနေပါတယ်။ လိင်ကိစ္စအတွက် ကျနော့်မှာ ရွေးချယ်ခွင့်သိပ်မရှိပါဘူး။ အတော်ကြာကြာတုန်းက ကျနော့်မှာ ယောက်ျားလေးရည်းစားတစ်ယောက်ရှိခဲ့ပေမယ့် အခုတော့ နောက်တစ်ပွေနဲ့ချိတ်ရင်ချိတ်လို့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းများပိုင်ဆိုင်နေသည်ပေါ့။ လိင်ကိစ္စ ပတ်သက်ဖို့ လူတစ်ယောက်ယောက်ကိုရှာချိတ်ရမယ့်ကိစ္စက ကျနော့်အတွက် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုဝင်ပြိုင်ရသလိုပါပဲ ပထမဆုလည်းရရော ပန်းစည်းတစ်စည်းပေးကာ ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ကြတယ်လေ။ ကျနော်နဲ့ အဆင်ပြေပြေ ဒိတ်လို့ရမယ့်လူတစ်ယောက်ယောက် ရှာမိ တယ်ဆိုတာ အတော်မဖြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျနော့်စိတ်ခံစားမှုကလည်း လူတိုင်းနဲ့ပတ်သက်ဖူးသူလို့ခံစားရတဲ့သူအတော်များများနဲ့ပတ်သက် ရမှာကို ရွံ့တွန့်တွန့်ဖြစ်မိတတ်တာကိုး။
ဒီနေ့က တနင်္ဂနွေနေ့ ကျနော့်အားလပ်ရက်တစ်ရက်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို အပြင်းအထန်လိုအပ်နေတယ်ဗျာ စိတ်ထဲမှာ အလွန့်ကို ဆာလောင်နေတဲ့ခံစားမှုမျိုးဖြစ်နေတယ်။ ဒီနေ့ဘာဖြစ်နေတယ်မသိဘူး မြင်ရတွေ့ရတဲ့လူတိုင်းက ဆွဲဆောင်မှုရှိနေသလိုပဲ။ ဘာတွေ ညာတွေ မတွေးချင်တော့ဘူး။ ဒါကြောင့် ဖုန်းလေးကိုဖွင့်ကာ ဒိတ်တင် Apps တွေကိုကလိရင်း မိုက်တယ်ထင်မိတယ် ငနဲတွေကို message အနည်းငယ်ပို့ပစ်လိုက်တယ်။ ဘဲတစ်ပွေကတော့ တွေ့ဖို့သဘောတူတာကြောင့် ကျနော်တို့ ကော်ဖီဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာ တွေ့ ကြရအောင် သွားရလာရလွယ်သော လမ်းမကြီးတစ်ခုနားကဆိုင်ကိုညွှန်းဆိုလိုက်ပါတယ်။
ကျနော် ခပ်စောစောလေးသွားလိုက်ကာ ထိုင်လို့ကောင်းပြီး နေရာလွတ်နေသော စားပွဲမှာ ထိုင်လိုက်ကာ သတင်းစာတစ်စောင်ကို ဖတ်နေလိုက်ပါတယ်။ ဒီကနေ့က ရာသီဥတုက ခပ်နွေးနွေးဆိုတော့ ကောက်ကြောင်း မသိမသာပေါ်စေသော Denim ဘောင်းဘီတိုရယ် အဖြူရောင် ရှပ်လက်တိုလေးကို ရင်ဘတ်ကြယ်သီးခပ်ဟဟထားကာ ၀တ်သွားလိုက်ပါတယ်။ ကျနော့် ပခုံးကျယ်ကျယ်တွေနဲ့ ကြွက်သား တွေကြောင့် တစ်ခါတလေ အ၀တ်အစားဝယ်ရတာ အဆင်မပြေတတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် အတိုအပြတ်တွေကိုပဲဝယ်ဝတ်တတ်တာမှာ တစ်ခါတလေတော့ ဒီoutfit လေးတွေက ကျနော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ကြည့်ကောင်းစေပါရော။
ခပ်ရွံ့ရွံ့ဝင်လာတဲ့ ငနဲကို ကျနော်တွေ့လိုက်ပါတယ်။ ကျနော်ထမရပ်မိခင်လေးမှာပဲ သူက ကျနော့်နောက်ပါးကိုလျှောက်လာကာ ပခုံးနဲ့ လက်မောင်းကို အသာပွတ်သပ်လိုက်ရင်း “၀ိုး…ခင်ဗျားက ဓာတ်ပုံထဲကထက် အပြင်မှာပိုထွားတာပဲဗျ…တကယ်အစစ်လို့တောင် မယုံနိုင်သလိုဖြစ်ရတယ်’’ တဲ့ပြောပါတယ်။
“ဟုတ်….ကျနော် ကိုကိုဇော်ပါဗျ…ကျေးဇူး” ကျနော် ခပ်ပြုံးပြုံးလေးတုန့်ပြန်လိုက်တယ်။
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်သား စကားစမြည်ပြောဖြစ်ကြတော့ သူ့ကြည့်ရတာ ဘာမှန်းကိုမသိဘူး ရဲရဲဝံ့ဝံ့မရှိ တစ်စုံတရာကိုစိုးရွံ့နေသလိုပဲ။ အပြင်ထွက်လာခဲ့ကြတဲ့အချိန်လည်းရောက်ရော ရှေ့ကနေ သူ ခပ်သုတ်သုတ်လျှောက်ကာ လမ်းသွယ်တစ်ခုထဲကိုရုတ်တရက်ချိုးဝင် သွားပါတယ်။ ကျနော်လည်း သွက်သွက်လိုက်ပေမယ့် မျက်ခြေပြတ်သွားတာကြောင့် အိမ်ကိုပဲပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။
‘တောက်’ ကျနော် စိတ်တိုစွာနဲ့ကော်ဖီဆိုင်လေးကိုပြန်လာပြီး ခဏထိုင်ကာ ဖုန်းလေးကိုဖွင့်ကာ အခြားဒိတ်လို့ရမယ့်သူ အသစ်တစ် ယောက် အနီးဝန်းကျင်မှာရှိသေးလာရှာဖွေကြည့်မိပါတယ်။
‘ပုံလေးကတော့ ချစ်စရာလေးပဲ ဒါပေမဲ့ အဲ့ကောင်လေးက အပြင်မှာဒီပုံစံအတိုင်းမဟုတ်ဘူးဗျ ရုပ်ဆိုးတယ်’
ကျနော်ဘယ်သူပြောလိုက်တာလဲလို့ ငုံ့နေရာကနေမော့ကြည့်လိုက်တော့ ထိုင်နေတဲ့စားပွဲနား ဘားကောင်တာနားမှာရပ်နေတဲ့ ငနဲလေး တစ်ပွေ။ တော်တော်ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောင်ငယ်ကလေးပဲ။ ပိုက်ဆံရှင်းရတဲ့ကောင်တာကဆိုတော့ ဆိုင်က၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ပဲဖြစ် မှာပါ။
‘အာ….မင်းက ဒီထဲမှာ အကောင့်ရှိတာလား?’ ကျနော်က မသိမသာမေးကြည့်လိုက်တယ်။
‘မဟုတ်ဘူးဗျ။ ညီ့သူငယ်ချင်းသုံးတာမြင်ဖူးတယ်။ အပြင်မှာသူတို့တွေ့တာလည်း ဒီဆိုင်မှာလေ။ အဲ့ဓာတ်ပုံလေးက ဘဲကြီး အသက် ၂၀ ၀န်းကျင်ကရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတဲ့။ အခု အသက် ၂၅လောက်ရှိပြီထင်တယ်။ အစ်ကို့အနေနဲ့မိုက်တာလေးတွေထပ်ရှာလို့ရပါတယ် ဗျာ’ ကောင်ကလေးက ခပ်တိုးတိုးဆိုတယ်။
‘ကျေးဇူး….ဒါပေမဲ့ ကိုယ်တို့တွေလည်း ဟိုရွေးဒီရွေးနဲ့မျောနေကြတာများတယ် ဟုတ်တယ်ဟုတ်?’
‘ဟား ဟား ဟား…ညီလည်း လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နာရီလောက်က ဒိတ်ကြည့်ပြီးပြီ။ အစ်ကိုဟိုသည်လျောက်ရှာနေတာမဖြစ်ရအောင် ညီကကူညီနိုင်မယ်ထင်တာပဲ။ ညီ ညီဆိုလိုတာက အစ်ကိုက အရမ်း hot တယ်ဗျာ။ အစ်ကိုနဲ့အလုပ်ချိန်ပြင်ပမှာတွေ့ဖို့ ဖြစ်တယ်မဟုတ်လား’
‘တကယ်လားကွ၊ မင်းလေးကလည်း ချစ်စရာကောင်းပါတယ်။ အစ်ကို့နာမည်က ကိုဇော်ပါ’ ကောင်ကလေး စကားအဆက်အစပ်မရှိ ရှက်သလိုလိုရွံ့သလိုလိုနဲ့ပြောနေတာကို ကျနော်က အတည်ပြုမေးလိုက် တယ်။
‘ဂျာရစ်’လို့ခေါ်နိုင်ပါတယ် အစ်ကိုတဲ့။ နာမည်ပြောင်ပဲဖြစ်မှာပါလေ။
ကျနော်တို့နှစ်ဦးသား လက်ဆွဲနှုတ်ဆက်လိုက်ပြီးနောက် လိပ်စာကဒ်လေးကို သူ့ကိုအသာပေးရင်း အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့လိုက်ပါတယ်။ ခဏနေသူလာတဲ့အခါ အသင့်ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ရမယ်လေ။ စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်မှုနဲ့အတူ မြောက်ကြွကြွခြေလှမ်းတွေနဲ့ဖြစ်နေရဲ့။
ရေမိုးချိုး အ၀တ်လဲလှယ်သန့်ရှင်းလိုက်သလို အိပ်ရာခင်းတွေကိုလည်း လဲလှယ်လိုက်တယ်။ ပြီးတော့ စိုးတထင့်ထင့်နဲ့ ထိုင်စောင့် နေလိုက်တာပေါ့နော်။
ဂျာရစ်လို့နာမည်ပြောင်ပေးထားတဲ့ ကောင်ငယ်လေးက ချစ်စရာလေးဗျ။ အသက်က ၁၉နှစ် ၂၀နှစ်လောက်ပဲရှိဦးမယ်။ အရပ်က ၅ပေ ၉လက်မလောက်ရှိလိမ့်မယ်။ ဆံပင်ခပ်တိုတို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ခပ်သွယ်သွယ်လေး။ ကြွက်သားသိပ်မရှိဘူး။ ကြွက်သားအပြည့်နဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ်တွေကိုတချိန်လုံးမြင်နေရတဲ့ ကျနော့်အတွက် အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို ကြိုဆိုရမှာပေါ့။
သူ အခန်းတံခါးကို ခပ်ဖွဖွခေါက်တယ်။ ကျနော် တံခါးကိုအသာအယာလေးဖွင့်ပြီး အတွင်းဝင်ခိုင်းလိုက်ရတာပေါ့။
‘မင်း တစ်ခုခုသောက်ချင်သလား?’ ကျနော် အသက်ပြည့်ပြီလား ဘာလား မ၀ံ့မရဲမေးရသေးတာလေ။
‘တော်ပြီဗျ မသောက်တော့ပါဘူး ကျေးဇူးပဲ အစ်ကို’ ဂျာရစ်က မတုန့်ဆိုင်းဘဲပြန်ဖြေတယ်။
ကျနော်အချိန်မဆွဲတော့ဘဲ သူ့ကိုဆိုဖာပေါ်လှဲလျောင်းစေလိုက်ကာ နှုတ်ခမ်းတွေကိုအနမ်းချွေလိုက်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ဘာလိုချင်နေ တယ်ဘာလုပ်ကြမယ်ဆိုတာ နှစ်ဦးစလုံးကသိပြီးသားပဲမဟုတ်လား။
သူ ကျနော့်ကိုအနမ်းပြန်ပေးပုံက တော်တော်မိုက်တယ်။ နုညံ့တယ် ငြင်သာတယ် ဒါပေမဲ့ တပ်မက်မှုအပြည့်နဲ့ပဲ။
ကျနော် သူ့လက်အစုံကိုဆွဲယူလိုက်ကာ အပေါ်ထပ် အိပ်ခန်းရှိရာကို ခေါ်သွားလိုက်တယ်။
နှစ်ယောက်သား ပွတ်သပ်ကြတယ် ထွေးဖက်ကြတယ် အနမ်းစစ်ပွဲဆင်နွှဲကြတယ် ခဏနေတော့ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ဝယ် အ၀တ်များမရှိကြ တော့ပါ။
ကျနော်တို့နှစ်ယောက်က တကယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဗျ။ ကျနော်က အရပ်ပုတယ် ခန္ဓာကိုယ်က ကြွက်သားအပြည့် အမွှေးအမျှင်မရှိသူ။ သူကတော့ အရပ်ရှည်တယ် သွယ်လျတယ် အမွှေးနုလေးတွေ တင်းကြမ်း ခန္ဓာကိုယ်မယ်။
ကျနော့်ငပဲဆိုဒ်က သာမန်အရွယ်အစားလောက်ရှိပေမယ့် သူ့ငပဲက နှုတ်ခမ်းတွေ ၀လုံးဝိုင်းမိအောင် ထွားပါတယ်။ အတုတ်က ၆လက်မ ပိုက်လောက်ရှိမလားဘဲ။
‘၀ိုး…’ ကျနော် မအောင့်အည်းနိုင် အာမေဋိတ်ပြုမိရတဲ့အထိပါပဲ။
ကျနော်ဘာမှဆက်မလုပ်ပဲ ခဏငြိမ်သွားမိတဲ့ခဏ သူက ကျနော့်ကို အိပ်ရာပေါ်တွန်းလှဲလိုက်ရင်း လုပ်လက်စအနမ်းကစားပွဲကိုဆက်လုပ် ကြပါတယ်။ သူ့လက်အစုံကို တင်းရင်း တစ်ရစ်နေတဲ့ ကျနော့်တင်သားဆိုင်တွေပေါ် ပြေးလွှားကစားနေစေရဲ့။ ကျနော်လှိမ့်ပြုလိုက်ပြီး သူ့အပေါ်ကိုတက်ခွလိုက်ပြန်တော့ သူ့လက်ချောင်းတွေဟာ တင်သားဆိုင်အစပ်က အကွဲကြောင်းတလျောက် ကလိထိုးတရွရွဖြစ်စေ ပြန်တယ်။ ပြီးတော့ တင်သားဆိုင်တွေကိုလက်နဲ့ အသာဖျစ်ညှစ်ပြန်တယ်။ ဒီကောင်လေး အသက်သာငယ်တာ ပညာတော့မငယ်တော့ မှန်းရိပ်မိရပါရော။
‘အစ်ကိုက အရမ်းမိုက်တဲ့ တင်တွေရှိတာပဲဗျာ’ ဂျာရစ်လေးက ခပ်တိုးတိုးညည်းညူပြောဆိုပါတယ်။
‘အဲ့တာနဲ့ မင်းလေးက ဘာလုပ်ချင်လို့လဲ ပြော’ ကျနော် ပါးချိုင့်ပေါ်တဲ့အထိပြုံးမိရရင်း သူ့ရင်အုပ်အစုံကို အနမ်းတွေပေးပစ်လိုက်တယ် လေ။
သူလေးကလည်း သူ့လက်ချောင်းတွေကို တို့ခတ်ကစားဖို့ နေရာအကွက်အကွင်းကို ဟိုစမ်းစမ်းသည်စမ်းစမ်းလုပ်ကာ ရှာဖွေပြန်တယ်။ ဒီလိုလုပ်ဆောင်ချက်လေးကလည်း ကျနော့်စိတ်ကို မရိုးမရွပိုဖြစ်စေသလို ပိုမိုလှုပ်ရှားစေပါရဲ့။ လက်ချောင်းထိပ်လေးနဲ့ ခရေ၀လေးကို အထုပ်အသွင်းကောင်းကောင်းသူကလိတာ ကြက်သီးတွေတဖြန်းဖြန်းထိမိတာဘာကြောင့်မှန်းကိုမသိပါဘူး။ မိနစ်အနည်းငယ်လောက် အဲ့သည့်အတိုင်းနေပြီးနောက် အိပ်ရာပေါ်ကိုဘေးတစောင်း ကျနော်လှဲချလိုက်ပြန်တော့လည်း သူက ခရေ၀ကိုဆက်လက် ရန်ရှာနေပြန် သဗျ။ ကျနော်ကတော့ သူ့ငပဲကြိးအတွက် အ၀င်ချောဖို့လုပ်နေတာပဲလေလို့သဘောထားခွင့်ပြုနေမိပါရဲ့။
ဘေးခြင်းယှဉ်လှဲနေပေမယ့် မျက်နှာချင်းဆိုင်အနေအထားဆိုတော့ သူကလည်း ကျနော့်ခရေ၀ကို စမ်းသပ်ဆဲ ကျနော်ကတော့ သူ့ထွားကျိုင်းလှတဲ့ငပဲကြီးကို ဆုပ်ကိုင်ဆဲပေါ့။ ကျနော်ဆုပ်ကိုင်ထားတဲ့ သူ့ငပဲကြီးဝယ် သွေးကြောကြီးတွေကထောင်နေတော့ သူ့အသက်အရွယ်နဲ့ဆိုရင် ဟုတ်ပါ့မလားစိတ်နဲ့ တထိတ်ထိတ်တိုးနေသော သွေးနွေးနွေးတွေကို အရသာခံနေလိုက်ပါတယ်။ လက်မလေးနဲ့ အရည်ကြည်စို့နေတဲ့ ငပဲခေါင်းထိပ်လေးကိုလည်း ပွတ်သပ်ရင်းပေါ့လေ။
ကျနော်တို့နှစ်ဦးသား နှစ်သက်မိန့်မူးမှုများနဲ့အတူ ညည်းညူသံတွေ တလှိုင်လှိုင်ကဲနေကြတာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုတောင် သတိမမူမိတဲ့အထိပါပဲ။ ကျနော် ဘာမဆိုအတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီထင်ပါတယ်။ ခုတင်ဘေး မီးအိမ်တင်ထားတဲ့ ခုံအံဆွဲထဲက ကွန်ဒုံးတစ်ခုကို ယူလိုက်ကာ မစွပ်ခင်ကလေးဝယ် သူ့ငပဲကို အတန်ငယ် တပြွတ်ပြွတ် ခပ်ဖြည်းဖြည်းစုပ်ပြုလိုက်မိရင်း နှုတ်စွမ်းပြမိပါသေးတယ်။
သူ့ငပဲမှာ ကွန်ဒုံးကိုအသေအချာစွပ်ပြုပြီး ချောဆီများများသုပ်လိမ်းလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော့်ခရေ၀ကို သူ့ငပဲနဲ့ထိတွေ့ရင်း တရစ်ပြီး တစ်ရစ်ဖိသွင်းဖို့ကြိုးစားမိရော။ ကိုယ်ခန္ဓာဟန်ချက်ကိုသေချာထိမ်းရင်း တစ်ဝက်လောက်ထိအသွင်းမှာ ဆက်မထိုင်ဖြစ် သေးဘဲ တစ်ဝက်လောက်ကလေးနဲ့ အထုတ်အသွင်းနှေးနှေး ကျနော်ဦးဆောင်တယ်။ သူ့မျက်ဝန်းတွေဟာ မှေးမှိတ်သွားသလို ခြေဖျားတွေဟားလည်း ကောက်ကွေးတော့မတတ် အကြောတွေထောင်ထလာတယ်ဗျ။ မိနစ်အနည်းငယ်ကြာချိန် လမ်းကြောင်း ချောသွားချိန်မတော့ ကျနော်အဆုံးထိထိုင်ချလိုက်တယ် အား….ဒုတ်ဒုတ်ထိဝင်သွားရော။ ကျနော်လုပ်ဆောင်သမျှငြိမ်နေတဲ့ ကောင်ကလေး အခုအချိန်မှာတော့ အောက်ကနေ မသိမသာပင့်ချက်တွေ ဆောင့်ချက်တွေအလိုက်သင့်ပေးစပြုလာတယ်။ ကျနော်က အဖိ သူကအပင့် ချိန်သားကိုက်လှုပ်ရှားကြရာမှာ အရှိန်ကိုသေချာထိန်းသိမ်းလုပ်မိကြပါသေးတယ်။ အချိန်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ် သိပ်အလျင်လိုဖို့မလိုဘူး မဟုတ်လား။
ကျနော်တို့မျက်နှာခြင်းဆိုင်အနေအထားပြောင်းလိုက်ကြပြီး လှေကြီးထိုးပုံစံနေလိုက်ကြပါတယ်။ သူ့ငပဲကို အနည်းငယ်နောက်ပြန်ဆုတ် လိုက်ပြီးမှ ကျနော့်ခရေထဲကိုအပြည့်ပြန်ဖြည့်လိုက်တာ ရှီး….ခပ်တိုးတိုးညည်းညူမိရတဲ့အထိပါပဲ။ သူ့ပစ္စည်းကိုပြန်ဆွဲမထုတ်ခင်ခဏ ကျနော့်တင်သားဆိုင်တွေကို ပွတ်သပ်ပြီး ဖြန်းဖြန်းမြည်အောင် ရိုက်ခတ်ပါသေးတယ်။ အာ….ကျနော့်စိတ်တွေကိုဘယ်လိုနှိုးဆွရမယ်ဆို တာ ဒီကောင်လေးသိနေတယ်ဗျ။
သူ့တုန့်ပြန်မှုကလည်းကြမ်းတယ် နွားသိုးကြိုးပြတ်နီးပါးပါပဲ။ ကျနော်လိုချင်တဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း သွက်သွက်လက်လက်လှုပ်ရှားမှုတွေ သူပေးနိုင်တယ်ဗျ။ ကျနော် သူ့စွမ်းအားနဲ့ သက်လုံကို အံ့အားသင့်ရပါတယ် ကြည့်ရတာ လေလှိုင်းတွေ တိမ်လွှာတွေအပေါ်ကို သူရောက်ရှိနေတဲ့ ပုံစံပါပဲလေ။
ကျနော်ခြေထောက်တွေကို သူ့ပခုံးပေါ်ထမ်းတင်ပြီး မလိုက်တဲ့အနေအထားဆိုတော့ တင်ပါးတွေကကြွတက်နေပြီး သူ့လှုပ်ရှားမှုအတိုင်း တဗြောင်းဗြောင်းဖြစ်နေရတာပေါ့လေ။ ဒီအနေအထားမှာတော့ ကျနော်လည်း ကိုယ့်ငပဲကိုကိုယ်ကိုင် အားရပါးရလက်ကစားမိရပြီပေါ့ နော်။ ကျနော့်လက်တွေဟာ နည်းနည်းတော့ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်းသလိုဖြစ်နေပေမယ့် ဂရုမစိုက်မိပါဘူး။ ချွေးတွေသီးပြီး စီးကျနေတဲ့ သူ့မျက်နှာနဲ့ တစ်ချက်ချက် မာန်သွင်းသလိုညည်းညူလိုက်တဲ့ သူ့အော်ဟစ်မှုတွေကို ကျနော်သာယာမှုနဲ့စောင့်ကြည့်မိတယ်ပေါ့။
‘အိုး…..အစ်ကိုက အရမ်းအပေးကောင်းတာပဲ….အာ တင်ပါးတွေကို ဘယ်လိုများညှစ်ညှစ်ပေးနေတာလဲ….ကောင်းကောင်းတယ်….အာ ညီ….ညီပြီးတော့မယ်…..arrrrrrrrgh’ သူ ကျနော့်မျက်နှာပေါ်ကို မိုးကြည့်နေတဲ့အနေအထားမှာ မထိန်းနိုင်မသိမ်းနိုင်အော်ညည်းပါရော။
ကျနော် တစ်မိနစ်လောက်သူ့ပေါင်တံတွေကို ကိုင်ထားမိပြီး သူ့ရဲ့နောက်ကျောကို အသာအယာပွတ်သပ်နေလိုက်ရင်း လည်တိုင်းလေးကိုလည်း အနမ်းချွေနေပစ်တယ်ဗျာ။ ကွေးထားတဲ့ ကျနော့်ခြေထောက်တွေကို မသိမသာလှုပ်လိုက်တော့ သူက ခပ်ဖြေးဖြေး ငပဲကိုဆွဲချွတ်လိုက်ကာ နံဘေးကိုလှဲချလိုက်တယ်။ ပြီးတော့ ကျနော့်ငပဲကို သူ့လက်အစုံနဲ့အားရပါရဆုပ်ကိုင်ကာ ပွတ်သပ် ဆော့ကစားပါရော။
‘ပန်းထုတ်လိုက်ဗျာ ဗလကြီးရာ……ညီ့အတွက် ပန်းထုတ်ပေးဗျာ….အာ….ဘယ်လောက်များများစုထားသလဲ ပြဗျာ’ သူ့နှုတ်ဖျားက ခပ်တိုးတိုး ရေရွတ်နေရင်း လက်ကစားတာ အဆက်မပြတ်ပါဘူး။ ဖြူလုံးနေတဲ့ သူ့လက်ချောင်းတွေထဲ နစ်မြုပ်လိုက် ပေါ်လာလိုက် ဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်ငပဲကို ပြန်မြင်နေရတာ တကယ်ရင်ခုန်ရသလို မကြာခင်မှာပဲ ကျနော့်ဗိုက်သားပြင်ပေါ်ကို သုက်ရည်တွေ အားရပါးရ ပန်းထုတ်မိပါတော့တယ်။
ကျနော် သူ့ပါးပြင်ကို ကျေးဇူးတင်တဲ့အနေနဲ့ တရွှတ်ရွှတ်အနမ်းပေးမိတယ်။
“ဟူး….တကယ်မိုက်တယ်၊ ဒီနေ့ကတော့ မျှော်မှန်းထားတာထက် ပိုကဲမိတဲ့နေ့လေးပဲ” ကျနော် ခပ်တိုးတိုးစကားဆိုဖြစ်ရဲ့။
“အစ်ကိုက အရမ်း Hotတာပဲဗျာ၊ ညီဖြင့် အခုဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို ယုံတောင်မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ ဒါပေမဲ့ ညီ အချိန်ပိုင်း ဒုတိယအလုပ်က အခုသွားရတော့မယ်ဗျ။ ပြီးတော့ ညီ့ boyfriend ကလည်း ဘယ်ပျောက်နေလဲသိချင်နေလောက်ပြီ” ဂျာရစ်ဆိုတဲ့ နာမည်ပြောင်နဲ့ကောင်ကလေး သူ့အ၀တ်တွေ ခပ်သုပ်သုပ်ဝတ်ဆင် ပစ္စည်းတွေပွေ့ပိုက်ပြီး အခန်းထဲက အလျင်စလိုထွက်သွားလေရဲ့ဗျာ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတော့ ကျနော့် Gym ကစားဖော်ကစားဖက် ဥက္ကာရဲ့ Mr.Crusher ပွဲရှိတာနဲ့ ခရီးထွက်ဖြစ်ရပါတယ်။ ကျနော်တို့အသင်းရယ် နည်းပြတစ်ယောက်ရယ် ပြီးတော့ ဆရာတစ်ယောက်က ဒိုင်လူကြီးအဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဆိုတော့ တစ်အုပ်စုပေါ့ ခရီးထွက်ဖြစ်ကြတာက။ ဥက္ကာနဲ့ ကျနော် အခန်းတစ်ခန်းအတူနေကြရတယ်။ တစ်ဦးချင်းအလှပြ သုံးယောက်သား စုပေါင်းအလှပြ နောက်ပြီး နယ်ခံတွေအတွက် ကိုယ်ဟန်ဘယ်လိုပြရတယ်ဆိုတာကို သင်တဲ့သဘောပွဲအစမ်းလေးတွေကော ကြုံဆုံရပါတယ်။
အားကစားကို အားကြိုးမာန်တက်ဝါသနာပါတဲ့သူလေးတွေကိုတွေ့ရတာ ကျနော်တကယ် စိတ်ချမ်းသာတယ်။ သူတို့တွေ စိတ်ပါလက်ပါ ကစားကြ ကိုယ်ဟန်ပြနေကြတာကိုကြည့်ရတာ ၀မ်းမြောက်ပါတယ်။
လက်ရွေးစင်တွေအတွက် သီးသန့်ထားပေးတဲ့ Gym အခန်းထဲမှာ ကျနော် ဆန့်ထုတ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်နေစဉ် ကျနော်တို့မြို့ကဖြစ် ပေမယ့် တခြားမြို့နယ်ကလာတဲ့ စည်သူ အနားကပ်လာတယ်။ ကျနော်တို့ သိပ်အရင်းနီးကြီးမဟုတ်ပေမဲ့ မကြာခဏဆုံမိကြတဲ့အဖြစ်ပါ။ သူလေးက တကယ်ကြွေစရာကောင်းအောင် ချစ်ဖို့ကောင်းသလို ဘောင်းဘီတိုဝတ်ထားတဲ့ ပေါင်ကြားထဲက ပစ္စည်းကလည်း စံချိန်မှီ ဆိုပေမဲ့ ကျနော့်စိတ်ထဲ ဘယ်လိုမှ ဖီလင်ကြွမလာပါဘူး။ ဘာလို့လဲတော့မသိပါ။
စကားစမြည်ပြောပြီးနောက် စည်သူ သူ့အသင်းရှိရာကိုပြန်လှည့်သွားတော့ ကျနော် သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဥက္ကာ တယောက် စပ်ဖြဲဖြဲနဲ့ ကျနော့်နားကပ်လာတယ်။ ကျနော်တို့အားကစားအသင်းတစ်ခုလုံးလိုလို ကျနော် ဂေးဆိုတာ သိကြသလို ကလပ်နည်းပြချုပ်ကလည်း သိပေမယ့် နိုင်ငံလက်ရွေးစင်အဖြစ်က နှုတ်ထွက်ရမလားဘာလားတော့ မသိသေးပါဘူး။ ဘာမှမပြော ပုံမှန် လိုပဲဆိုတော့ ကျနော်ကံကောင်းနေပါသေးတယ်။
‘ငါ့ကောင် မင်း ကောင်မလေးတွေ သွားငမ်းနေတာမဟုတ်လား?’ ကျနော် ဥက္ကာကိုမေးလိုက်တယ်။
‘အေးပေါ့ဟ ကောင်မလေးတွေ သွားငမ်းရတာပေါ့ ဘဲငမ်းစရာလား’ သူက ရယ်ရယ်မောမောနဲ့ပြန်အဖြေပေးပါတယ်။
‘မင်းနဲ့ စည်သူက တရားဝင်တွဲနေကြပြီလား’
‘မတွဲပါဘူးကွ၊ တစ်နှစ်လုံးနေမှ ငါတို့ သုံးလေးကြိမ်လောက်ပဲ ဆုံဖြစ်ကြသေးတယ်ထင်တယ်’ ဥက္ကာအဆိုကို ငြင်းဆိုစကားပြောလိုက် တယ်။
‘သူ မင်းကိုကြိုက်နေတယ်ကွ…အမြဲလိုလို မင်းကိုသူစောင့်ကြည့်နေတတ်တယ်’ ဥက္ကာကပြောရဲ့။
‘အဲ့ကိစ္စက ငါတို့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့အတောအတွင်း အလုပ်မဖြစ်မှာတော့သေချာတယ်ဟ’ ကျနော်ပြန်ပြောလိုက်တယ်လေ။
အရာကိစ္စအလုံးစုံဟာ သူ့အလိုလို ရက်အနည်းငယ်အတွက်ကျော်ဖြတ်သွားပါတယ်။ ကျနော်တို့တွေ အဆင့်တစ်ခုကို ဖိုင်နယ်တစ်ပွဲ နှစ်ပွဲဆင်နွှဲခဲ့ရပါရဲ့။ ကျနော်က ပ ဒု တမချိတ်ပေမဲ့ နံပါတ်လေးချိတ်လို့တော်ပါသေးတယ်လေ။ ဆုတံဆိပ်တစ်ခုနဲ့အတူ ဆုကြေးငွေ အချို့လည်းရခဲ့တာပေါ့။ ဥက္ကာကတော့ လူသစ်တန်းမှာ ဗိုလ်ဆွဲခဲ့တာကြောင့် ကျတော့်စိတ်အစုံဟာ Cloud 9ပေါ်ဝဲနေရော။ ဥက္ကာနဲ့ ကျနော်က ဆေးသွားစစ် အပြင်ခဏထွက် ရေအတူချိုး အ၀တ်လဲတာကအစ အတူတူပါ။ အခန်းထဲက ကျနော်တို့မထွက်ခွာခင် ငွေ အကြွေစေ့လေးနဲ့ ခေါင်းပန်းလှန်ကြတယ် ဒီညအတွက် အခန်းကိုဘယ်သူမောင်ပိုင်စီးခွင့်ရမလဲလို့လေ။ ၀ူး….ကျနော်နိုင်တယ်။ နှစ်ဦးသား ဟိုတယ် ballrooms တွေထဲကတစ်ခုမှာ အုပ်စုလိုက်စားသောက်ဖို့စောင့်နေကြမယ့်သူတွေဆီ ဆင်းသွားလိုက်ကြတယ်ပေါ့။
ကျနော် စည်သူကိုခပ်မြန်မြန်ပဲရှာ အတူတကွထိုင်ကြပြီး တစ်ယောက်လက်ကိုတစ်ယောက်ဆုပ်ကိုင်ထားကြတယ် စားပွဲအောက်မှာပေါ့။ ကျနော့် ဘော်ဒါလေး စည်သူက ဗမာစကားကို ရေရေလည်လည်မပြောတတ်တဲ့တိုင်းရင်းသားဖြစ်ပေမယ့် သူကောင်းကောင်းအထာကျ အောင်ပြောနိုင်ပါပေရဲ့။ ကျနော့်လက်ချောင်းလေးတွေဟာ တဖြေးဖြေးနဲ့တွားသွားလိုက်တာ သူ့ပေါင်ခွဆုံကိုရောက်ကရော။ အိုး…. အထူးစပါယ်ရှယ် ပြီးတော့ အသားကုန်သန်မာတယ်ဗျ။
‘မင်းက ငါ့ရဲ့အစာပိတ်အချိုပွဲလေးပဲ’ ကျနော်သူ့နားရွက်နားကပ်ကာ ခပ်တိုးတိုးရေရွတ်လိုက်တယ်။
သူ့မျက်နှာဝယ် ပြုံးတုံ့တုံဖြစ်လာပါရဲ့။ ဒေသခံအားကစားသမားတွေ ဆုရအားကစားသမားတွေအကုန် ကျေးဇူးစကားဆိုကြ နှုတ်ဆက် မိတ်ဆက်စကားပြောကြ ညစာစားပွဲလေးက အလျင်အမြန်ပါပဲ။ ခဏလေးသော အချိန်တွေတိုင်းဟာ ကျနော့်စိတ်ထဲ နှိပ်စက်ကလူနေ သလို တုန့်နှေးသလားလို့ထင်မိပါတယ်။
ဓာတ်လှေကားထဲရောက်တော့သူ ကျနော့်ကိုနံရံကိုဖိကပ်စေပြီး နှစ်ဦးသား မွတ်သိပ်တပ်မက်စွာ အနမ်းစစ်ပွဲဆင်နွှဲကြသလို လက်လေးဘက်ဟာလည်း နေရာအနှံ့ပြေးဆော့ပါရော။ ထွက်လာရတဲ့ ခရီးရဲ့ကာလက တိုတောင်းတာကြောင့် ကျနော့်စိတ်ထဲ မချင့်မရဲကိုဖြစ်လို့ပါ။
ဓာတ်လှေကားတံခါးရုတ်တရက်ပွင့်သွားမလား ကျနော့်မှာ ရင်တထိတ်ထိတ်ကိုဖြစ်လို့ပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ စည်သူက ဘောင်းဘီ အဟကနေ ကျနော့်ဘောင်းဘီထဲလက်လျှိုကာ တင်ပါးတွေကော ခရေ၀ကိုရောပွတ်သပ်ကလိနေတာလေ။ ဖြစ်တည်နေတဲ့ ဇာတ်လမ်းကို ရှေ့ဆက်ရမလား ရပ်တန့်လိုက်ရမလား လုပ်သင့်သလား မလုပ်သင့်သလား ကျနော် တွေဝေစိတ်ခဏတော့ဝင်မိပါတယ်။
နှစ်ဦးသား အခန်းထဲလည်းရောက်ရော ကျနော်တို့ အနမ်းပြီး အနမ်း….နောက်ပြီး အနမ်းစစ်ပွဲဆက်တိုက်ပါပဲ။
‘ငါ အချိန်သိပ်မရဘူးကွာ….ငါ့အသင်းသားတွေ ဒီည သွားကြရတော့မှာလေ’ စည်သူကပြောတယ်။
ကျနော် ခေါင်းတစ်ချက်ငြိမ့်ပြလိုက်ကာ သူ့အ၀တ်တွေကို ဆွဲချွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ ချီတုံချတုံဖြစ်မိပါတယ် နှစ်ယောက်သား အတူတူထထွက်သွားဖို့အဆင်ပြေမပြေကိုပေါ့လေ။ ဘာမှန်းကိုမသိပါဘူးဗျာ ကျနော်ဘာကိုဆိုလိုတယ်သဘော ပေါက်တယ်မဟုတ်လား။
သူ့ကြမ်းရှရှာ လျှာဖျားလေးနဲ့ ကျနော့်ခရေအနှံ့ကစားသလို အခြားနေရာပွိုင့်အတော်များများကိုလည်း သူထိခတ်ကစားတတ်တာတွေ့ ရပါတယ်။ အို….တကယ့်ဆရာကြီးပါပဲ….သူ့ကျွမ်းကျင်မှုတွေကြောင့် ကျနော်သက့်သောင့်သက်သာလေးနဲ့ အချိန်ကောင်းတွေကို ပိုင်ဆိုင် ရပါရော။
အိပ်ထဲအသင့်ဆောင်ထားတတ်တဲ့ ချောဆီနဲ့ ကွန်ဒုံးကို သူ့ကိုလှမ်းပေးလိုက်တော့ သူက ကျွမ်းကျင်မြန်ဆန်စွာစွပ်လိုက်ရင်း ခပ်တုတ်တုတ် ငပဲကို ချောဆီနဲ့အဆင်ပြေစေကာ ကျနော့်ခရေ၀ကို တိုးဝင်လာစေတာက လျှပ်စစ်ရထားအတိုင်းပါပဲ။ နှစ်ဦးသား နှုတ်ဖျားက ကျေနပ်သာယာတဲ့ညည်းညူသံကိုယ်စီထွက်လာမိကြပေမယ့် အရာရာက ထင်သည်ထက်မြန်ဆန်နေသလိုပါပဲ။ သူက ခပ်သွက်သွက်လှုပ်ရှားကာ ခဏနေတော့ သူ့ငပဲကိုဆွဲချွတ်လိုက်ပြီး တရမ်းရမ်းဖြစ်နေတဲ့ ကျနော့်ငပဲကို -ှုပ်ဖို့ပါးစပ်ထဲသွင်းလို့ရတဲ့ အနေအထားကိုပြောင်းလိုက်ပါတော့တယ်။ ကျနော်သူ့ဦးခေါင်းကိုလက်နှစ်ဖက်နဲ့ ထိန်းကိုင်ထားရင်း ခါးကိုအလှုပ်အရမ်းပြုကာ ပါးစပ်ထဲကို ငပဲအား အထုပ်အသွင်းကစားမြန်မြန်လုပ်မိပါတယ်။ သာယာချိန်က သိပ်မရပါဘူး သူလည်းအပြင်မှာပဲပြီး ကျနော်က သူ့ပါးစပ်အစွမ်းကြောင့် ခပ်မြန်မြန်ပဲဇာတ်လမ်းသိမ်းဖြစ်ပါတယ်လေ။
“မင်းက အရမ်း Hot တာပဲနော်’ ကျနော် သူ့ရင်အုပ်ကိုအနမ်းတစ်ချက်ပေးလိုက်ရင် စကားဆိုလိုက်မိတယ်။
‘ငါ မင်းနဲ့ဒီထက်ပိုပြီးအတူနေချင်ပါသေးတယ်…ဒါပေမဲ့ အခုတော့ဒီလောက်ပဲနော်’ စည်သူက ကျနော့်ကိုခပ်ကြပ်ကြပ် တစ်ချက်ပွေ့ဖက် လိုက်ရင်းပြောပါတယ်။
သူ့ကိုနှုတ်ဆက်အနမ်း ၀မ်းနည်းစွာပေးမိရရင်း သူထွက်ခွာသွားတာကိုစောင့်ကြည့်နေမိပါတယ် ခဏတာ။
ကျနော် အိပ်ယာပေါ်မှာလှဲလျောင်းရင်း အလှည့်အစောင်းအရွေ့အပြုမလုပ်မိပါဘူး။ ကျနော့်ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့က သူ့ရနံ့တွေကွယ်ပျောက် စေဖို့ ကိုယ်လက်သန့်စင်တာလည်း မလုပ်မိသေးဘူးပေါ့။ ကျနော် မနက်နိုးဖို့ နှိုးစက်လည်းချိန်ပြီးပြီ အ၀တ်ထုတ်တွေကိုလည်းပြန်လည် ထုပ်ပိုးပြီးပြီဆိုပြန်တော့ အိပ်ရာပေါ်ကိုပြန်တက်လှဲလျောင်းကာ ကျနော်တို့နှစ်ဦးသားအကြောင်းပြန်တွေးဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကပြိုင်ပွဲလိုဖြစ် နေတဲ့ နိုင်ငံ့လက်ရွေးစဉ်ဖြစ်ဖို့ နှစ်နှစ်အတွင်းကြိုးစားပြီးရင် retire ယူဖို့ကျနော်စီစဉ်မယ် ကျနော့်လက်ရှိကစားနေတဲ့အသင်းအကျိုး အတွက် တစ်ခုခုလုပ်ဆောင်ပြီးရင်ပေါ့။ စည်သူလည်း ကျနော့်လိုပဲ အစီအစဉ်တွေချမှတ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာ သိတယ်။ အင်း….ဒါကို စောင့်ဖို့အတော်ကြာတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုကိုဖြတ်သန်းရဦးမယ်။ ကျနော်သူ့ကိုကြိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ သူဟာ ကျနော့်အတွက် Mr. Forever ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့တော့ မထင်မိပါဘူးလေ။
ဥက္ကာ ရေချိန်လွန်ပြီးပြန်လာတယ်။ ‘ငါ ငါ ထုတ်ခံရတယ်’ ဥက္ကာ ၀မ်းပမ်းတနည်းငိုချလိုက်ရင်းပြောပါတယ်။
‘Seriously? ငါက မင်းသွားကစားတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းက လုံခြုံစိတ်ချရတယ်ထင်နေတာ’ ကျနော် သူ့ပခုံးကိုတစ်ချက်ပုတ်လိုက်ရင်း စကားခပ်တိုးတိုးပြောလိုက်တယ်။
‘ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့ ကစားဝိုင်းကပြန်အထွက် တစ်ယောက်ခြင်းစီအကြောင်းကိုသူတို့သိသွားတယ်လေ’ ဥက္ကာ အသာတစ်ချက်ရှိုက်ငို လိုက်ပြန်ရဲ့။
"ငါ့ကောင်ရာ ၀မ်းနည်းပါတယ် ကြားရတာ” ကျနော် ဒါပဲပြောမိရပါတယ်။
‘မင်းကြည့်ရတာ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့လိင်ဆက်ဆံခဲ့တဲ့အနေအထားပဲဟ…ဟို ကရင်ကို ငါ lobby အ၀င်မှာတွေ့လိုက်မိသေးတယ်။ အဆင်ပြေရဲ့လား?’ ဥက္ကာက ခပ်တိုးတိုးမေးမိပေမယ့် လူမိသွားတော့ ကျနော့်မှာ နည်းနည်းရှက်မိရပါတယ်။
‘အေး…ငါလည်း တစ်ယောက်ယောက်နဲ့အတူရှိနေချင်တာပေါ့ကွာ။ မင်းက အခု အသင်းကထုတ်ခံလိုက်ရပေမယ့် အိမ်မှာ မင်းကောင်မလေးရှိသေးတယ်။ ငါက ဒီလိုတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ချိန်းတာလောက်ပဲလုပ်နေသေးတာလေ။ တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ချိတ်ဖို့ဆိုတာကလည်း အခု စည်သူနဲ့ ခဏလေးတွေ့ရတာဆိုတော့…တကယ့် အရှုပ်ထုတ်ပါပဲကွာ’ ကျနော် နည်းနည်းလေးလောက် အတွန့်တက်လိုက်ပါတယ်။
‘ဆောရီးကွာ….မင်းနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တစ်ယောက်ယောက်တော့ရှိပါတယ်။ မင်းက အရမ်းတော်တဲ့လူတစ်ယောက်ပဲဟာ။နောက်ပြီး …အာ… ငါ့စိတ်ထဲက ပေါက်ကွဲချင်စိတ်တွေကို မင်းဖောက်ထုတ်ပေးနိုင်မလား…ကျေးဇူး…ကျေးဇူးပြုပြီး’ ဥက္ကာ ရေချိန်လွန်ပြီး ဘာတွေ တောင်းဆိုနေလဲမသိပါဘူး။ သူ့ကို ကျနော် တိမ်းမူးနေတာမှန်ပေမယ့် ဒီလို တဲ့တိုးကျတဲ့တောင်းဆိုမှုမျိုးကြုံဆုံလာရမယ်လို့မှ ထင်မထားမိပဲဗျ။
သူ့ကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့ အ၀တ်မဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ကုတင်ပေါ်ကန့်လန့်ဖြတ် ပက်လက်လှဲလျောင်းနေသလို မျက်လုံးဝိုင်းဝိုင်းကလေး တွေက ကလေးတစ်ယောက်လို ငံ့လင့်နေတဲ့ဟန်လေး အထင်းသားပေါ်နေတယ်။
‘ငါ ငါ…အနမ်းနွေးနွေးလေးတွေရယ် ထွေးဖက်ထားတာရယ်ကိုပဲလိုချင်မိတာပါကွာ….အဲ့ဒါမှ ငါကောင်းကောင်းအနားယူချင်စိတ်ဖြစ်လာ မိမယ်ထင်တယ်’ ဥက္ကာ စကားအဆန်းတွေပြောနေတယ်။
ကျနော်ကတော့ မယုံမကြည်ဆိုပေမယ့် သူက ကျနော့်နံဘေးမှာ အသာဝင်လှဲလျောင်းတယ်။ သူ့မျက်နှာပြင်ပေါ်ဝေ့၀ိုက်ကျနေတဲ့ ဆံနွယ်တွေကို ကျနော်သိမ်းဖယ်ပေးချိန်မှာတော့ ကျနော့်နှုတ်ခမ်းတွေကို အနမ်းချွေပါရော။ ပထမဆုံး သူအနမ်းချွေချိန်မှာတော့ နှစ်ဦးသားရဲ့ အတိတ်ဇာတ်ကြောင်းကို နောက်ပြန်ရစ်သလို စဉ်းစားမိပါတယ်။ ကျနော်နဲ့ ဥက္ကာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်သိတာ ၉နှစ်သားကတည်းကပါ။ အသက် ၁၃နှစ်အရွယ်ရောက်တော့ အတူတူ Jerk-off လုပ်ဖြစ်တဲ့ယောက်ျားသားဆိုရင်လည်းသူပါပဲ။ အသက် ၁၅နှစ်အရွယ်ရောက်တော့ အပြန်အလှန် blow jobs လုပ်ဖြစ်ကြပြီးနောက်မှာတော့ အခုကာလရှည်တွဲဖြစ်မယ့် ကောင်မလေးနဲ့သူ ရည်းစားဖြစ်သွားတော့တာပါပဲ။ ကျနော် အသည်းကွဲမကျန်ရစ်ခဲ့သလို သူသည်လည်း အသည်းခွဲသွားသူမဟုတ်ပါဘူး နှစ်ယောက်လုံးဟာ လိင်စိတ်တက်ကြွသော ဆယ်ကျော်သက်လေးတွေ အတွေ့အကြုံအသစ်အဆန်းကို စမ်းသပ်မိကြရုံလေးပဲဖြစ်မှာပါ။ ကျနော်သူ့ကို ဘယ်တုန်းကမှ ကြိတ်မကြွေခဲ့သလို နှစ်ဦးသားဟာ အံ့အားသင့်ဖွယ် သူငယ်ချင်းကောင်းတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတာ အခုအချိန်တိုင်အောင်ပါပဲ လေ။ ကျနော်တို့ နှစ်ယောက်သားကြားမှာ ထူးခြားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေမလုပ်ဖြစ်ခဲ့တာ နှစ်တွေချီကြာနေပြီပဲဗျ။
ပစ္စုပ္ပန်ကာလကိုပြန်အာရုံစိုက်မိတော့ ပက်လက်လှန်ထားတဲ့ ကျနော့်ကိုယ်ပေါ် သူခွထိုင်နေပြီး လက်ကစားနေတာမှာ ကျနော်က အနမ်းတစ်ချက် လှမ်းပေးပြီး သူ့လက်မောင်းတွေကို ပွတ်သပ်ပေးနေလိုက်ပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ့ရွှေဥတွေကိုလည်း ထိတွေ့ပွတ်သပ် ကစားလိုက်သည်ပေါ့။
‘မင်းတစ်ယောက်ပဲ ငါ့အပေါ်အမြဲတမ်းကောင်းတယ်’ ဥက္ကာက ညည်းတွားရေရွတ်မှုများကြား ခပ်တိုးတိုးဆိုရဲ့။
သူ့သုက်ရည်ဖြူပျစ်ပျစ်တွေဟာ ကျနော့်ကိုယ်ပေါ်ကို တစ်စက်စက်ပန်းကာ ပေစေတာနွေးကနဲ နွေးကနဲပဲ။
ကျနော်တို့နှစ်ဦးသား ခဏလေးတော့တပ်မက်စွာ နမ်းပြီးငြိမ်နေမိကြသေးတယ်။
‘ငါတို့နှစ်ယောက်ဘာကြောင့် ဒီလိုလေးတွေမလုပ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲမသိ’ ဥက္ကာက မေးသေးတယ်။
‘ဘာကြောင့်ဆို မင်းက စန္ဒာနဲ့မင်းတွေ့သွားတာလေကွာ’ ကျနော့်တုန့်ပြန်တဲ့လေသံက မကျေမနပ်သံများပါသွားသလားပဲ။
‘မဟုတ်ပါဘူး အဲ့ဒါကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။ ငါတို့တွေ အဲ့ဒီအချိန်မတိုင်ခင်က ထူးခြားတဲ့ပတ်သက်မှုမျိုးတွေ ပိုဖြစ်ခဲ့သင့်တာလေ။ ငါက မင်းဆို တကယ်ခင်တွယ်နေမိတာ သိတယ်မဟုတ်လား?’ ဥက္ကာက ၀န်ခံတယ်။
‘ငါတို့အဲ့ဒီကလေးအရွယ်တုန်းက ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှုပ်ရှက်ခပ်နေကြတာလေ’ လို့ ကျနော်ပြောလိုက်မိရော။
‘ငါ စန္ဒာနဲ့ဆုံခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်။ သူ့ကိုအမြဲလိုလိုလိမ်လည်နေခဲ့ပေမဲ့ ချစ်တော့ချစ်ပါတယ်ကွာ’ ဥက္ကာ တစ်ယောက် ကျနော့်ရင်ခွင်ထဲ အိပ်မောမကျခင် တိုးတိုးပြောသွားပါတယ်။ ပြီးတော့ သူ အိပ်မောကျသွားရောဗျ။
ခပ်စောစောနိုးထဖို့ဆိုရင် နှိုးစက်ပေးဖို့ပဲရှိတော့တယ်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးသား အတူတကွရေချိုးခြင်းဖြင့် အချိန်ကုန်သက်သာစေခဲ့သလို နှစ်ဦးသား ခေါင်းခြင်းဆိုင်ချိန်ပိုရခဲ့တာပေါ့။
ကျနော့်စိတ်ထဲ နေရတာ တစ်မျိုးဖြစ်နေတယ်။ ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်သည့် အားကစားသမားတွေဟာ တစ်စစ်စစ်ကိုက်တာတွေနဲ့ နာကျင်တာတွေကို အမြဲလိုခံစားရတတ်ကြတာမှန်ပေမယ့် ကျနော့်ပခုံးက ပိုမိုဆိုးရွားနေသလိုခံစားရပြီး သက်သောင့်သက်သာမရှိလှ ပါဘူး။
ကျနော့် coach ကိုလေယာဉ်ပေါ်မှာပြောပြလိုက်တယ်။ သူက ဗဟိုကိုတိုက်ရိုက်သွားပြီး အသင်းဆရာဝန်နဲ့တွေ့ဖို့ရယ် physiotherapist နဲ့ကုဖို့ပြောပါတယ်။
ပခုံးနာကျင်ခြင်းတစ်ရပ်က ကျနော့်ဘ၀ကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။
အသင်းဆရာဝန်က တစ်ကြိမ်လောက်ပဲစမ်းသပ်စစ်ဆေးပေးပြီးနောက် physio ကိုသွားပြခိုင်းတယ်။ သူကလည်း သေချာတဲ့ အကြောင်းပြချက် တစ်ခုခုကိုမပြောပြန်ဘူး။
ဒါကြောင့် နောက်တစ်ယောက်ကိုစုံစမ်းလိုက်ပြန်တော့ ကျနော်ရှိရာ camp ကိုလာဖို့အဆင်မပြေဘူးဆိုတာကြောင့် လိပ်စာကိုသေချာ မေးမြန်းလိုက်ကာ သွားဖို့စီစဉ်လိုက်ရပါတယ်။
ကျနော် Treatment Room ထဲဝင်သွားလိုက်တော့ နှလုံးခုန်သံတွေရပ်ဆိုင်းသွားရပါတယ်။ သူက တကယ့်ကိုချောမောလှပလွန်းတယ် တကယ့် တကယ့်ကိုချောမောလှပလွန်းတယ်။
သူ့ကိုယ်သူမိတ်ဆက်ပါတယ် နာမည်က ဝေဖြိုးပါတဲ့။ ကျနော်တို့နှစ်ယောက် လက်ရှိကျနော်ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာနဲ့ အရင်ကဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာများအကြောင်း ပြောဖြစ်ဆွေးနွေးဖြစ်ကြပါတယ်။ လုပ်သင့်သော လေ့ကျင့်ခန်းအချို့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးဖြစ်ကြသလို ထရိန်နင်မှာ ဘယ်ဟာတွေကို limit ထားရမယ်ဆိုတာတွေကိုလည်း သူကပြောပြပါတယ်။ နောက်တော့ ကုသမှုအတွက် အ၀တ်တွေကို ချွတ်လိုက်ရရော။
ကျနော့်ကိုယ်ခန္ဓာအနှံ့က ကြွက်သားဆိုင်တွေကို သူ့လက်တွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေတုန်းမှာ သက်သောင့်သက်သာ ဖြစ်ဖို့ အတော်ရုန်းကန် ရပါတယ်။ တချိန်လုံး တိတ်တဆိတ်သူ့အလုပ်သူလုပ်နေတာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ အနီးပိုကပ်လာချိန်များမှာ သူ့အသက်ရှူသံတွေကို ကျနော် ကြားနေရော။
ကျနော့်ငပဲဟာ မာတောင့်လွန်းလို့ ကျောက်ခဲလိုဖြစ်နေသလို အရည်ကြည်များစိမ့်ထွက်တာကလည်း ယိုစီးနေတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ ကျနော် ထထိုင်လိုက်ရချိန်မှာတော့ အဲ့သလိုဖြစ်နေတာကို ဖုန်းကွယ်ဖို့နည်းလမ်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါပဲ ဘာမှထူးမခြားနားတဲ့ဟန်သဘော အမူအယာလုပ်လိုက်ရတယ်။ အချို့သော လေ့ကျင့်ခန်းသဘောအကွေးအပြု အပြောင်းအလဲများမှာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်က ကျနော်နဲ့ပိုပို တို့ထိ လာသလိုဖြစ်တာကြောင့် ပိုစိတ်လှုပ်ရှားရရော။ သူအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာ ကျနော်သတိထားမိတယ်။ ချွေးစို့နေတဲ့ သူ့ဘောင်းဘီတိုဟာ ဖုန်းကွယ်မှုမလုပ်နိုင်ပါဘူး။
‘ဆရာ တောင့်တင်းနေတာတွေ ပြေလျော့သွားအောင် ကူညီရမလား?’ နောက်ဆုံးတော့ ကျနော် ခပ်တိုးတိုးမေးလိုက်မိတယ်။
သူ ခေါင်းငြိမ့်ပြသလို လက်မှာပတ်ထားတဲ့နာရီကို တစ်ချက်ငုံ့ကြည့်လိုက်ကာ အခန်းတံခါးကို လော့ခ်ျလုပ်လိုက်ပါတယ်။
ကျနော် ခပ်မတ်မတ် ရပ်နေတဲ့ သူ့ရှေ့ဒူးထောက်ထိုင်ချလိုက်ကာ ချွေးရွှဲ်နေတဲ့ ဘောင်းဘီမျှော့ကြိုးကိုဆွဲဖြုတ်လိုက်ရင်း တန်းကနဲထွက် လာတဲ့ ငပဲကြီးကို နှုတ်ခမ်းသားတွေနဲ့ရစ်ဝိုက်လိုက်တယ်။ လျှာလေးနဲ့ ငပဲခေါင်းတ၀ိုက်ကိုရစ်ပတ်ပြီး စုပ်ပြုလိုက်တဲ့ခဏမှာပဲသူ ဇာတ်သိမ်းသွားပါတယ်။ အချိန်တိုတောင်းပေမယ့် မဆိုးပါဘူးလေ ကျနော် ကျေနပ်ပါတယ်။
‘ဒီည ရုပ်ရှင်တစ်ကားလောက်သွားကြည့်ရအောင် လိုက်မလားဗျ’ သူက ကျနော့်ကိုမေးတယ်။
ဒရမ်ရိုက်တဲ့တုတ်တံက ဒရမ်ကို ခတ်သလိုမျိုး ကျနော် ခေါင်းငြိမ့်ပြလိုက်တယ်လေ။
‘ဟို….professional မဆန်သလိုများ ဖြစ်သွားလားဗျာ’ သူက စိုးရိမ်မကင်းတဲ့လေသံနဲ့ တိုးလျှိုးတယ်။
‘ကျနော် ကွန်ပလိန်းမလုပ်ပါဘူးဗျာ’ ကျနော့်နှုတ်ဖျားက တားချိန်မရ တုန့်ပြန်သံကထွက်မိလိုက်တယ်လေ။
ကျနော်တို့အချိန်နဲ့နေရာကိုစီစဉ်ကြတယ်ပေါ့။ ကျနော် gym ကိုပြန်လာပြီး လက်ရှိအခြေအနေတွေပြောပြ နည်းပြအလုပ်တွေကိုလွှဲ နည်းပြချုပ်ကိုအကြောင်းကြားဖို့လည်းလုပ်ခိုင်းခဲ့ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာ တကယ်ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ နှစ်ဦးသားလက်တွေကိုထွေးယှက်ထားတာ တချိန်လုံးပါပဲ။ သူနေထိုင်ရာကိုလိုက်သွား တော့ ခြံဝင်းကျယ်ကျယ်ထဲမှာဆောက်ထားတဲ့ တစ်ထပ်တိုက်ပုလေးကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်။
နှစ်ယောက်သား ဆိုဖာပေါ်မှာထွေးဖက်ကာထိုင်နေမိကြပြီး Lemon Tea ကိုသောက်ဖြစ်တယ်။ သူနဲ့နေထိုင်ရတာ အရင်ကတွေ့ဆုံဖူးသူ များနဲ့မတူ တကယ့်ကို သက်သောင့်သက်သာရှိနေတဲ့စိတ်ခံစားချက်မျိုးရပါတယ် တကယ်ပါ။
ကျနော် သူ့ကို နုနုညံ့ညံ့ အနမ်းတစ်ချက်ပေးလိုက်ပြီး လက်နှစ်ဖက်နဲ့သူ့ကိုရစ်သိုင်းဖက်လိုက်တော့ သူက အနည်းငယ်တွန်းထုတ်ဟန်ပြု ပါတယ်။
‘အင်း….အကြာကြီးတွဲလာတဲ့ တစ်ယောက်နဲ့ လတ်တလောကမှ လမ်းခွဲထားတာဗျ။ ဒါကြောင့် အလုပ်မှာပဲ အချိန်အကြာကြီးနေဖြစ်တဲ့သူ ဖြစ်နေရတာပါ။ ကျုပ် ခင်ဗျားကို တကယ် တကယ် သဘောကျတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျုပ်အတွက် အချိန်နည်းနည်းတော့ယူရဦးမယ်နဲ့တူတယ်’ ဝေဖြိုးက ညည်းတွားသလိုဆိုတယ်။
‘ဒါပေမဲ့ ဒီနေ့မနက်ကတော့?’ ကျနော် အမေးစကားဆန်ဆန်ပြောလိုက်တော့ ‘စိတ်လိုက်မာန်ပါဖြစ်သွားခဲ့တာပါဗျာ’ ဝေဖြိုးက ဖြတ်ပြောလေရဲ့။
‘ခင်ဗျားကို ကျုပ် တကယ် သဘောကျသွားမိတယ်။ ခင်ဗျားအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကျုပ်အတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် အချိန်ယူစဉ်းစားကြတာပေါ့။ ကျုပ်အထင်တော့ ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးတစ်ရပ်ထူထောင်နိုင်ဖို့ ခပ်ဖြေးဖြေးသွားမှပဲကောင်းမယ်လေ။ ဒါမှ ထာဝရမြဲတဲ့ အချိန်တွေကို နှစ်ယောက်ပိုင်ဆိုင်ရမှာ။ သဘောတူလား ဗျ’
Alex Aung (31 Jan 2016)
Posted by Alex Aung at 4:17 PM